fanagasiana Toetra Ràja André Rakotondranaivo AéRa Malagasy fampianarana E D Andriamalala
15 mey 2017
Tsoriko fa tena fitiavana ary adidiko amin'ny fireneko ny nahatonga ahy hanoratra boky, indrindra ho amin'ny fampianarana. Rehefa nitaky ny fanagasiana ny fampianarana eto Madagasikara mantsy ny Mpianatra, notarihin'ireo zokiny teny amin'ny Anjerimanontolo, tamin'ny taona 1972, dia neken'ny fitondram-panjakana tamin'izay ny maha-rariny izany ka dia notanterahina. Izao anefa no olana: ny Mpampianatra nilaza fa tsy nofanina hampianatra teny malagasy, ary marina tokoa izany. Ny boky hoenti-mampianatra koa tsy nisy rahateo. - Koa ny tenako izay nampianatra tany Antsirabe tamin'izay fotoana izay no anisan'ny voaantso ho aty Antananarivo hamolavola ny fandaharam-pianarana. "BEP-OTEP" na "Bureaux d'Etudes de Programme" no anarana nomena anay tao amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana tamin'ny taona 1973.
André Rakotondranaivo. Raha tena maika ny fampandrosoana ny toe-karen'ny Malagasy, dia tsy latsa-danja amin'izany ny asa miandry ireo mpikaroka sy mpanoratra bokim-pianarana amin'izao fotoana izao!